Australie - Zimbabwe en images - FIFA.com
Alanna Kennedy of Australia celebrates after scoring a goal
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Alanna Kennedy of Australia celebrates after scoring a goal during the Women's Football match between Austrlia and Zimbabwe on Day 4 of the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 7, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Chung Sung-Jun - FIFA/FIFA via Getty Images)
Caitlin Foord (L) of Australia vies for the ball with Rejoice Kapfumvuti (R) of Zimbabwe
Caitlin Foord (L) of Australia vies for the ball with Rejoice Kapfumvuti (R) of Zimbabwe during their Rio 2016 Olympic Games women’s first round Group F football match Australia vs Zimbabwe, at the Arena Fonte Nova Stadium in Salvador, Brazil on August 9, 2016. / AFP / NELSON ALMEIDA
Australia celebrates scoring a goal during the match between Australia and Zimbabwe
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Australia celebrates scoring a goal during the match between Australia and Zimbabwe of the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 9, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Felipe Oliveira/Getty Images)
Msipa of Zimbabwe in action during the match between Australia and Zimbabwe
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Msipa of Zimbabwe in action during the match between Australia and Zimbabwe at the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 9, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Felipe Oliveira/Getty Images)
Lisa de Vanna of Australia celebrates with with her team-mates
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Lisa de Vanna of Australia celebrates with with her team mates after scoring a goal during the Women's Football match between Austrlia and Zimbabwe on Day 4 of the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 7, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Chung Sung-Jun - FIFA/FIFA via Getty Images)
Magwede of Zimbabwe reacts during the match
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Magwede of Zimbabwe reacts during the match between Australia and Zimbabwe at the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 9, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Felipe Oliveira/Getty Images)
Caitlin Foord of Australia comtetes for the ball with Eunice Chibanda of Zimbabwe
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Caitlin Foord of Australia comtetes for the ball with Eunice Chibanda of Zimbabwe during the Women's Football match between Austrlia and Zimbabwe on Day 4 of the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 7, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Chung Sung-Jun - FIFA/FIFA via Getty Images)
Alen Stajcic head coach of Australia gestures
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Alen Stajcic head coach of Australia gestures during the Women's Football match between Austrlia and Zimbabwe on Day 4 of the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 7, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Chung Sung-Jun - FIFA/FIFA via Getty Images)
Caitlin Foord of Australia competes for the ball with Rejoice Kapfumvuti of Zimbabwe
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Caitlin Foord of Australia competes for the ball with Rejoice Kapfumvuti of Zimbabwe during the Women's Football match between Austrlia and Zimbabwe on Day 4 of the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 7, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Chung Sung-Jun - FIFA/FIFA via Getty Images)
Simon of Australia celebrates with teammates after scoring a goal
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Simon of Australia celebrates with teammates after scoring a goal during the match between Australia and Zimbabwe of the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 9, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Felipe Oliveira/Getty Images)
Caitlin Foord of Australia comtetes for the ball with Nobuhle Majika
SALVADOR, BRAZIL - AUGUST 09: Caitlin Foord of Australia comtetes for the ball with Nobuhle Majika of Zimbabwe during the Women's Football match between Austrlia and Zimbabwe on Day 4 of the Rio 2016 Olympic Games at Arena Fonte Nova on August 7, 2016 in Salvador, Brazil. (Photo by Chung Sung-Jun - FIFA/FIFA via Getty Images)
Australia celebrates scoring a goal